Finatinas - 차모르어 - 버마어 번역 및 예문
검색어: finatinas (차모르어 - 버마어)
Este finatinas y Señot, ya janafanmanman gui menan atadogta.
ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်း၊ အံ့ဩဘွယ်ဖြစ်၏ဟူသောစကားကိုကျမ်းစာ၌ သင်တို့သည် မဘတ်ဘူး သလောဟု မိန့်တော်မူ၏။
သူတို့၏ရုပ်တုများမူကား ငွေလည်းဖြစ်၏။ ရွှေလည်း ဖြစ်၏။ လူလက်ဖြင့် လုပ်သောအရာပေတည်း။
ယောဟန်သည်ဗတ္တဇံကိုပေးရာအရပ်၊ ယော်ဒန်မြစ်တဘက် ဗေသနိရွာ၌ ဤအမှုအရာဖြစ်သတည်း။
အချို့မူကား၊ ဖာရိရှဲတို့ထံသို့သွား၍ ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုကို ကြားပြောကြ၏။
Cantaye si Jeova ni y finatinas grasias; cantaye alabansa sija gui atpa, para y Yuusta.
ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းလျက် ထာဝရဘုရား ရှေ့တော်၌ သီချင်းဆိုကြလော့။ စောင်းတီး၍၊ ငါတို့၏ ဘုရားသခင်ကို ထောမနာသီချင်းဆိုကြလော့။
Ya anae munjayan jasaluda sija, jasanganen adumidide ni y finatinas Yuus gui entalo Gentiles pot y chechoña.
ပေါလုသည်ထိုသူများကို နှုတ်ဆက်ပြီးလျှင်၊ မိမိသည် ဓမ္မဆရာအမှုကိုဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရား သခင်သည် တပါးအမျိုး သားတို့တွင်ပြုတော်မူသမျှတို့ကို သေချာစွာ ထုတ်ဘော်ပြသလေ၏။
Sa timanmalago jalie y checho Jeova, ni y finatinas y canaeña, ufanyinilang sija ya ti uninafangajulo.
Yaguin manmachaguejam pago na jaane pot y mauleg finatinas para y malango na taotao, sa jafa muna manajomlo;
အင်္ဂါချို့တဲ့သောသူကို ကျေးဇူးပြု၍၊ သူသည် အနာရောဂါနှင့် အဘယ်သို့ ကင်းလွတ်သနည်းဟု ငါတို့သည်ယနေ့အစစ်ခံရလျှင်၊
ခရစ်တော်ပြုတော်မူသောအမှုတို့ကို ယောဟန်သည်ထောင်ထဲမှာကြားသောအခါ၊ မိမိတပည့်နှစ် ယောက်ကို စေလွှတ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ကြွလာသောသူမှန်သလော။
Sa y Gueftaquilo, ti sumasaga gui guima sija ni y finatinas canae; taegüije y sinangan y profeta.
Ya maninepe as Jesus iligña: Taya nae intaetae este y finatinas David anae ñalang yan y mangachongña?
ထိုသူသည် သွား၍၊ ယေရှုသည် အဘယ်မျှလောက် ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကို၊ ဒေကာပေါလိပြည် တွင် သိတင်းကြားပြောသည်ဖြစ်၍၊ ခပ်သိမ်းသောသူတို့သည် အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။
Lao pago, mañelujo, nae jutungo na pot y taya tiningomiyo na infatinas ayo, taegüije y finatinas y magalajenmiyo locue.
ယခုလည်း ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့မှစ၍ အစိုးရသောသူတို့သည် မသိဘဲလျက် ထိုသို့ပြုကြသည်ကို ငါသိ၏။
Manope si Jesus: Ti umisao este na taotao ni sija manaenaña lao para y finatinas Yuus ya ufafanue guiya güiya.
ယေရှုကလည်း၊ ကိုယ်အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်။ မိဘအပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ အမှု တော်ကို သူ၌ ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းတည်း။
Para y finatinas y taotao, pot y finijo ni guinin y labiosmo, jumantiene yo gui san juyong y chalan ni y manyuyulang.
လူပြုတတ်သော အမှုများမှာ၊ ဖျက်ဆီးတတ် သော သူ၏လမ်းတို့ကို နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် အကျွန်ုပ်ရှောင်ပါပြီ။
နှုတ်ကပတ်တော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့် ကင်း လွတ်လျက်ဖြစ်သော အရာတစုံတခုမျှမရှိ။
Ya jumanao juyong ya jadalalag, ya ti jatungo ayo cao magajet y finatinas y angjet; lao jinasoña na manlie güe vision.
ပေတရုသည် ထွက်၍လိုက်သော်လည်း၊ ကောင်းကင်တမန် ပြုသမျှတို့သည် မှန်သောအမှုအရာ ဖြစ်သည်ဟု မသိမမှတ်ဘဲ၊ မိမိသည် ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကို မြင်သည်ဟုထင်လေ၏။
Ya anae manmato Jerusalem, manmaresibe gui iglesia yan y apostoles, yan y manamco; ya jadeclara todo y finatinas Yuus pot sija.
ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လျှင်၊ တမန်တော်တို့နှင့် သင်းအုပ်တို့မှစ၍ သင်းဝင်သူများတို့တွင် လက်ခံခြင်း ကျေးဇူးကိုခံ၍၊ မိမိတို့အားဖြင့် ဘုရားသခင်ပြုတော်မူ သမျှတို့ကို ပြန်ကြားကြ၏။
ထိုအခါ မာရိဆီသို့လာသော ယုဒလူအများတို့သည် ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုကိုမြင်လျှင်၊ ကိုယ်တော် ကို ယုံကြည်ကြ၏။
baubereich (독일어>네덜란드어)fududeeyaa (소말리어>영어)face murithal (타밀어>영어)extinguish (영어>그리스어)ipa haba (타갈로그어>영어)livideces (스페인어>덴마크어)zinloos (네덜란드어>영어)four section (영어>칸나다어)nakigbugtiay (세부아노어>프랑스어)magpapalyok (타갈로그어>세부아노어)정말 감사합니다 (한국어>영어)hatinggabi kabaliwan (타갈로그어>영어)levaverunt (라틴어>스웨덴어)may have (영어>타갈로그어)apstiprinÄ jis (프랑스어>영어)వదిన కూతురు (텔루구어>영어)spark keluar dari grating (말레이어>영어)fetus (영어>한국어)shepherd (영어>힌디어)kodu (폴란드어>체코어)evaluation (영어>노르웨이어)argent à la bourse (프랑스어>영어)nadf (러시아어>이탈리아어)prinosite (세르비아어>크로아티아어)sucedera (스페인어>이탈리아어)